Trafikana basy : Mpanera 7 voasambotra -
AccueilRaharaham-pirenenaTrafikana basy : Mpanera 7 voasambotra
Trafikana basy : Mpanera 7 voasambotra
30/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Miparitaka ny basy. Tsy mahagaga raha mirongatra izay tsy izy ny fanafihana mitam-piadiana, na eto an-drenivohitra, na ny any amin’ny faritra. Basy kalaky iray, PA, Big Boss miampy Revolver sy bala miisa dimy ambinin’ny folo no saron’ny polisy tany amin’ny fokontany Analankinina, sy tao Ankirihiry Tomasina, ny alatsinainy sy talata lasa teo. Mpanera miisa fito no nosamborina rehefa nahatratrarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo, izay lehilahy ny dimy ary vehivavy ny roa.
Araka ny fanazavana nentin’ny kaomisera Rakotovao Jean Christian avy amin’ny polisy boriborintany voalohany, dia tamin’ny alalan’ny vela-pandrika no nahafantarana ireto tompon’antoka amin’ny trafikana basy ireto. Misy amin’ireo no mpampanofa ny basy amin’ny jiolahy, ary koa mivarotra izany mivantana amin’ny vidiny lafo. Vehivavy nampiasain’izy ireo, nanamora ny fivezivezen’ireo fitaovam-piadiana no nisy nahatsikaritra, ka nahafahana nisambotra ny iray tamin’izy ireo tany amin’ny trano fandraisam-bahiny iray tao Analankininina Hopitaly Be. Rehefa nohadihadiana ity farany dia nanoro ny misy ny namany, ka nosamborina tany Ankirihiry ny marainan’ny talata indray ny namany. Mbola ireto mpanera miisa fito mampanofa sy mpivarotra basy amin’ny jiolahy hatreto no voasambotra. Tamin’ny fisavana ny trano fonenan’izy ireo no naha-sarona ireo basy mahery vaika sy bala maro. Efa mandeha amin’ny famotorana lalina amin’izay tena ambadik’izao raharaha trafikana basy izao ny polisy sy ny zandary any an-toerana taorian’izay. Hatolotra ny fampanoavana ihany koa ireo fito lahy aorian’ny famotorana azy ireo. Raha ny tokony ho izy dia tsy ahazon’ny olon-tsotra alalana mihitsy ny mitana ny basy toa ny kalaky izay fampiasan’ny mpitandro filaminana irery ihany. Mitohy ny fikaroham-baovao amin’ny fikarohana izay tena mpamatsy ireo fitaovam-piadiana.
Iza no ambadik’izao?
Raha ny tati-baovao avy amin’ny kaomisera avy ao amin’ny boriborintany voalohany any Toamasina dia tsy nilaza izay niavin’ireo basy mahery vaika ireto mpanera ravan’ny polisy sy ny zandary ireo. Azo antoka kosa anefa fa ho hita izay tena marina mahakasika ny raharaha, rehefa eo anoloan’ny fitsarana. Etsy andanin’izay dia noho ny firongatry ny fanafihana mitam-piadiana nahalasitra tokantrano sy nahafaty olona maro tao anatin’ny volana maromaro no nahatonga azy ireo nanao ny fidinana ifotony raha ny fanazavana. Nahitam-bokany ny fikaroham-baovao ka nanao valandresaka sy fampahafantarana ny asa vitany tamin’ny mpanao gazety tany an-toerana ireo mpitandro filaminana, omaly. Notarihan’ny polisy avy amin’ny boriborintany voalohany ao Toamasina, nanotrona izany ny lehiben’ny kaomisaria avy ao amin’ny polisy boriborintany faharoa ao Mangarano, ary ny kaomandin’ny Force d’Intervention de la Police Nationale (FIP).
metropolitan group home exteriors reviews dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
furniture mover dans « RAMILY TEODORIN ! »
metropolitan group home exteriors dans Fikambanana masoandro mody-NAHAZO FANAMPIANA AVY AMIN’NY VADIN’NY FILOHA
http://africa-rising-wiki.net/ dans Directe al desirabilite de un nov lingua refusa continuar
Abzocke dans Directe al desirabilite de un nov lingua refusa continuar
Praiminisitra Mahafaly Olivier : Nanome baiko ireo minisitra hamita ny PTA
Anisan’ny nisongadina nandritra ny fampitam-baovaon’ny filan-kevitry ny governemanta notanterahina omaly, ny fanomezan’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier baiko ho an’ireo minisitra mpikambana eo anivon’ny governemanta amin’ny famitan’izy ireo faran’izay haingana ny Programan’asa isan-taona eo anivon’ny minisitera ...Tohiny
Fizarana kits scolaires : Feno hipoka ny coliséum
Fitsinjaram-pahefana : Hisokatra anio ny fihaonana an-tampon’ny AICT
Kidnapping Karana : Mazava ny resaka
Ekipam-pirenen’ny tsipy kanetibe:NAHAZO 20 TAPITRISA ARIARY TAMIN’NY FILOHAM-PIRENENA
metropolitan group home exteriors reviews: Title [...]we came across a cool web-site that you may possibly appreciate. Take a search in the event you…
furniture mover: Title [...]Sites of interest we've a link to[...]
metropolitan group home exteriors: Title [...]just beneath, are a lot of totally not associated web-sites to ours, however, they are certainly worth going…